माधव पक्षका यी शक्तिशाली नेतानै ओलीको पक्षमा उभिए , नेपालको फोन उठाएनन् ! - Juneli Daily
माधव पक्षका यी शक्तिशाली नेतानै ओलीको पक्षमा उभिए , नेपालको फोन उठाएनन् !
काठमाडौं । माधव कुमार नेपाल समूहलाई झड्का लागेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले साथ छाडेपछि माधवलाई झड्का लागेको हो ।
मिश्रलाई खनाल–नेपाल समूहले भक्तपुरको इन्चार्ज बनाएको थियो । लगत्तै उनले नेपालनिकट नेताहरूलाई फोन गरेर आफू गुटको नेता नभएको र पार्टीकै इन्चार्ज बन्ने बताएका थिए । एकीकृत पार्टीमा उनी सहइन्चार्जको भूमिकामा थिए ।
फोन अफ गरेर मिश्र ओली समूहसँग संवादमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बाबुरामको चम्कियो भाग्य , दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री ?
जनता समाजवादी पार्टी देशको राजनीतिको गेमचेन्जरको रुपमा यतिबेला देखिएको छ । जसपा ढल्कियो त्यतै गोल हुने अवस्था आएको छ ।
तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु थप २ बर्ष बढ्ने बताएका छन् । अदालतको फैसलापछि नेकपा दुईधारमा बाडिएको थियो बाटिएकै समय देखि एमाले र माओवादीमा खटपट सुरु भएको थियो ।
ओली नेतृत्व सरकारको विरोधमा आफ्नै पार्टीको सरकारलाई सहयोग गर्नको साटो उल्टै सरकार ढाल्ने असहयोग गर्न पार्टीको हितविपरित कार्य गर्न विरोध गर्न पार्टीको नियम विपरित कार्यगर्न भएकाले आफुले बाध्य भएर नेपाल समुहलाई कारबाही गनुपरेको बताएका छन् ।
अहिलेको समयमा नेकपा एमालेको बास्तविक सहयोगी जसपा मात्र भएको बताएका छन् । जसपाले आफ्नो पार्टी ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने बताई रहेको छ । यसै क्रममा जसपाले आफ्नो पार्टीका कार्यकरर्ता र नेतालाई लागेको मुद्धा खारेज गर्न र रेशम चौधरी लगायत सम्पुर्ण नेता कार्यकतालाई बिना सर्त रिहा गर्न ओली सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
र यो पक्रिया अघि बढिसकेको सरकारले जानकारि दिएका छन् । विपक्षीहरु धेरै सल्बलाएकाले आफ्नो भरसीलो सत्ता साझेदारि पार्टी जसपा मात्र भएको ओलिले एक कार्यक्रममा बताए । हुन त जसपा अब बन्ने जुनसुकै सरकारमा निर्णयक हो , काग्रेस माओवादीले धेरै लबिङ नगरेको होईन तर सबै आफ्नो कामहरु वर्तमान सरकारले गर्ने भएपछि किन अरु पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भनेर जसपा चुपचाप बसेको छ ।
एमालेको बहुमत नपुग्ने देखे पछि केपी ओलीको सरकारमा आफ्नै पार्टीमा खेदो खन्नेलाई दिनु भन्दा जसपासँग सत्ता साझेदारि गर्न बरु प्रधानमन्त्री जसपालाई दिने सोच ओलीले बनाएका छन् ।
उसो त प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटार नै बोलाएर प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अफरले महन्थको मन पगि्लएपछि जसपाभित्र भाँडभैँलो सुरु भएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई अहिलेको सरकारलाई जतिसक्दो बिदा गर्नुपर्छ दिनहु सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिईरहेका छन् भने महन्थ ठाकुर लगायत जसपाका केही शीर्ष नेता ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्छौ भनिरहेका छन् । यस्तै विवादले जसपा टुकि्रने खतरा भने बढेको छ ।
आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव छिटै पेश गर्ने जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
गृह जिल्ला गोरखामा मंगलबार पत्रकारसँगको भेटमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदैनन् । नैतिकता भएको मान्छेले मात्र राजीनामा दिन्छ । उनबाट त्यो अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनलाई हटाउने तरिका भनेको अविश्वास प्रस्तावमार्फत नै हो । अब छिट्टै अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउछौँ ।’ काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनाममा माग गरिसकेकाले अविश्वास प्रस्ताव लैजाने ढोका खुलेको उनले बताए ।
‘कांग्रेस, जसपा, माओवादी यी तीनवटा शक्ति र एमालेभित्र जो केपी ओलीसँग सहमत छै्रन, उहाँहरु पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्छु भनेर तत्परता देखाएको अवस्थामा हामी छिट्टै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई हटाउछौँ,’ उनले भने ।
संविधानमा भएअनुसार अविश्वास प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेद्वारी दिनुपर्ने तर माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिइसकेको हुनाले प्राविधिक रुपमा गृहकार्य गर्न केही कठिनाइ भएको समेत उनले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री जो पनि हुनसक्छ । अहिले कुनै पार्टीको बहुमत छैन । धेरै ठूलो अन्तर पनि छैन । तीनै पक्षको दाबी रहनसक्छ तर यही कारणले ओलीको लोकतन्त्र विरोधी अभियानलाई बल पुग्ने कामचाहिँ हुने दिँदैनौँ,’ उनले भने । ओली सरकारको आयु जति लम्बिँदै जान्छ, मुलुकलाई उति धेरै क्षति हुँदै जाने भट्टराईले टिप्पणी गरे ।
नेपाली राजनीतिले कतिबेला कस्तो मोड लिन्छ पूर्वानुमान गर्न सकिदैँन् । तर पनि प्रधानमन्त्रीले डा. भट्टराईलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडी सारे उनी युटर्न हुने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
जसपाकै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउदा आफूहरुले राखेका मागहरु पूरा गर्न सहज र अनुकुल हुने सो पार्टीका नेताहरुको आकलन छ ।